Ilay Fariseo sy ilay mpamory hetra
"Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra."Lioka 18:14
"Aza haingam-bava, ary aza malaky manonona teny eo anatrehan’Andriamanitra ny fonao; fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao et? an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao."Mpitoriteny 5:1
Fanoharana vitsivitsy; Lioka 18:9-14
Famintinana: Nandeha nankany an-tempoly mba hivavaka ity Fariseo (mpikambana ao amina antokom-pivavahana jiosy fanta-daza) sy ity mpamory hetra (mpanangona ny hetra tsy maintsy aloa amin’ny mpanjana-tany romana). Iry voalohany dia nihevi-tena ho tsara noho ny hafa, ka nisaotra an’Andriamanitra noho izany. Ilay faharoa kosa dia nahatsapa ireo fahadisoany, ka nangataka ny famindrampon’Andriamanitra, nitalaho hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota”. Dia ambaran’i Jesosy ny fomba fijerin’Andriamanitra: ilay faharoa no nohamarinina, fa tsy iry voalohany.
Heviny: Ilay Fariseo dia maneho ny olona matoky ny tenany sy ireo fanaony ara-pivavahana; manjary mihevitra ny tenany ho ambony noho ny hafa izy. Ilay mpamory hetra dia maneho ny olona mahatsapa ny tsy fahamendrehany eo anatrehan’Andriamanitra, nefa mivavaka aminy am-pinoana.
Fampiharana: Raha jerena ivelany, dia mitovy ny fihetsik’ireo olona roa ireo, ary tsara: nivavaka tao an-tempoly izy ireo. Saingy tsy ampy izany; ny toe-po no zava-dehibe; io no ahariharin’ny teny lazain’izy roa lahy: na dia nivavaka aza ilay Fariseo, dia nitoky tamin’ny tenany. Nitanisa ny fahamendrehany manokana izy, ary tsy fantany ny atao hoe fahatsarampon’Andriamanitra.
Ilay mpamory hetra kosa dia nahafantatra fa mpanota izy, kanefa nitoky tanteraka tamin’ny fahasoavan’Andriamanitra. Nony niala teo an-tempoly izy, dia fantany fa nihaino sy nandray azy Andriamanitra. Feno fiadanana ny fony rehefa nody izy. Nandray ny toerana tandrify azy teo anatrehan’Andriamanitra izy, ary nahazo fampiononana sy fanamarinana. Aoka isika haka tahaka azy!